“ဗန်ဒါသီး”စေ့ အကြောင်းသိကောင်းစရာ မြန်မာပြည်က ဗန်ဒါပင်တွေ ရွှေဖြစ်ပြီ … - Myanamr Express
မြန်မာပြည်မှာ ဗန်ဒါပင်(ဗန်ဒါသီး)လို့အလွယ်ခေါ်လေ့ရှိတာကြောင့်၊“ဗာဒံပင်” ဆိုတဲ့ သူ့မူလအမည် ပျောက်ကွယ်နေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အမည်ကတော့ Indian Almond ပါတဲ့။
ဗာဒံစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူနဲ့တည့်တယ်၊ ကျန်းမာရေးကောင်း တယ်၊ အသားအရေကို ကောင်းစေတယ်စတဲ့အခြေခံ ဗဟုသုတလောက်တော့လူတိုင်းသိကြမှာပါ။
သို့သော် ဗာဒံစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ဘယ်လောက်တောင်များပြားတယ် ဆိုတာသိနိုင်ကြပါစေရန် မျှဝေရေးသားလိုက်ရပါ တယ်။
ဗာဒံပင်ကအကြီးမြန်ပြီး၊အရွက်တွေ ကလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့် အတက်မြန်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရိပ်ရအပင်အဖြစ် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။
အပင်ကိုပေါပေါများများမြင်တွေ့နေရတာရယ်၊ အပင်အောက်မှာ ကလေးငယ်အချို့ကြွေကျလာတဲ့ အသီးကို အုတ်နီခဲအကျိုးဖြင့် ထုခွဲစားနေကြတာရယ်ကြောင့် အရိပ်ရပင်မှရတဲ့အစေ့ရဲ့ကျန်းမာရေးတန်ဖိုးကို သတိမမူမိကြပါ ဘူး။
ယနေ့နိုင်ငံ တကာမှာတော့ ဗာဒံစေ့နဲ့ ၎င်းမှရတဲ့အဆီကို တန်ဖိုးထားစားသုံးနေကြပါပြီ။ ဗဟုသုတအနေဖြင့် မျှဝေရပါလျှင် ဂရိ နိုင်ငံရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ ဗာဒံစေ့ကို “wedding sweets” အဖြစ်အထူးတလည်ဧည့်ခံနေကြပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံမှာ တော့ NewYear ပါတီပွဲတို့လို ထူးထူးခြားခြားနှစ်ပတ်လည် ဧည့်ခံပွဲတွေမှာပင်လယ်မှ ဆားဖြင့်အငံဖောက်ထားတဲ့ဗာဒံစေ့ လှော်နဲ့ဧည့်ခံလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
မော်ရော့ကိုနိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးအခမ်းအနား များမှာဗာဒံစေ့မှုန့်ရောထားတဲ့ နွားနို့က မပါ လျှင်မပြီးပြန်ပါဘူး။
pasanda-style (ခေါ်) အိန္ဒိရိုးရာဟင်းလျာမှာလည်း ဗာဒံစေ့ကိုဟင်းခတ် အမယ်အဖြစ် ထဲ့ချက်ပေးရပါတယ် တဲ့။
ဗာဒံစေ့ကအေးမြစေတဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိတာကြောင့်လည်းပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နွေရာသီများမှာ ဗာဒံစေ့ နဲ့ဖော်စပ်ထားတဲ့ Almond sherbet ဖျော်ရည်ကို summer drink အဖြစ် အထူးတလည်သောက်သုံးကြတယ်လိုသိရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု USDA ရဲ့ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များအရ ၁ဝဝ-ဂရမ်အလေးချိန် ရှိတဲ့ ဗာဒံစေ့ထဲမှာ၊ လူသားတို့ကျန်းမာရေး ကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ခွန်အား ၅၇၆ ကယ်လိုရီ၊ ကစီဓာတ် ၂၁.၆၉ ဂရမ်၊ကော်ဓာတ် ဝ.၇၄ ဂရမ်၊
သကြား ၃.၈၉ ဂရမ်၊ ချေဖျက်လွယ်သောအမျှင်ဓာတ် ၁၂.၂ဝဂရမ်၊ အဆီဓာတ် ၄၉.၄၂ ဂရမ်၊ ပရိုတင်း ၂၁.၂၂ ဂရမ်၊ လိုင်စင်း ဝ.၅၈ဝရမ်၊ရေဓာတ် ၄.၇ ဂရမ်၊ ဗီတာမင်အေ ၁ IU၊ သီအာမင်(ခေါ်) ဗီတာမင်ဘီ(၁) ၁၈%၊ ရီဘိုဖလာဗင်(ခေါ်)ဗီတာမင်ဘီ(၂) ၈၅%၊
င်္နအာစင်း (ခေါ်) ဗီတာမင်ဘီ(၃) ၂၃%၊ဗီတာမင်ဘီ(၅) ၉%၊ ဗီတာမင်ဘီ(၆) ၁၁%၊ ဖောလိပ်(ခေါ်) ဗီတာမင်ဘီ(၉) ၁၃%၊ ချိုလင်း ၁၁%၊ ဗီတာမင်အီး ၁၇၅%၊ ကယ်လ်စီယမ် ၂၆%၊ သံဓာတ် ၂၉%၊ မဂ္ဂနီစီယမ် ၇၅%၊ မဂ္ဂနီးစ် ၁ဝ၉%၊ ဖော့စဖရက် ၆၉%၊ ပိုတက်စီယမ် ၁၅% နဲ့ ဇင့် ၃၂% တို့အသီးသီးပါရှိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဗာဒံစေ့တွေဟာ အသားအရေနုကို ပြန်လည်ပျိုစေကာ၊ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားများလည်း ကောင်းစေလို့ကျား/မ အရွယ်(၃)ပါးအားလုံး စားသုံးပေးကြရန် USDA က အကြံပြုထားပါတယ်။
အူသိမ်၊ အူမများနဲ့ အတွင်းပိုင်းအကျဆုံး အူများအားလုံးကိုသန့်စေပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသားအရေဟာ သူစားသုံးလိုက်သောအစာချေဖျက်အင်္ဂါ အဖွဲ့အစည်းရဲ့အလုပ်လုပ် နိုင်စွမ်းအားနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေပါတယ်။
အစာချေဖျက် အင်္ဂါများအားနည်းလာတဲ့အခါဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး၊ဝက်ခြံစို/ဝက်ခြံခြောက် တွေပေါက်လာစေပါတော့တယ်။
ဗာဒံစေ့ကိုမှန်မှန်စားပေးခြင်းဖြင့် အစာအိမ်ထဲရှိအကျိုးပြု ဗက်တီးရီးယားများကိုလှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့်အစာချေဖျက်မှုကိုအားပေးကာ၊ ဝမ်းပုပ်များသက်စေပြီး၊ အစာချေအင်္ဂါ အဖွဲ့အစည်းသန့်စင်သွားတာကြောင့်၊ အသားအရေတွေလည်း မညစ်ညမ်းတော့ပါဘူး။ ဗီတာမင်အီး ရရှိရာအရင်းအမြစ်ကိုပြပါဆိုရင် ဗာဒံစေ့ကိုသာ လက်ညှိးထိုးလိုက်ပါ။
ဝက်ခြံစို/ဝက်ခြံခြောက်/ဆားဝက်ခြံ အမျိုးမျိုးနဲ့မျက်နှာပေါ်ရှိအမည်းစက်များ၊အမာရွတ်များအတွက် ဘယ်လိုပင်မိတ်ကပ်ကောင်းကောင်းလိမ်းပါသော်လဲ မပျောက်နိုင်တဲ့အခါ စိတ်ညစ်ရပြီး၊ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများလည်း အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသကြည့်ကြရာ၊ဆရာဝန်တိုင်းက အသားအရေကောင်းစေဖို့ ဗီတာမင်အီး ဆေးတောင့်လေးတွေ တိုက်ကျွေး လေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒီဗီတာမင်အီး ဆေးတောင့်တွေနဲ့ဗီတာမင်အီးဓာတ်ပါတဲ့ ဆေးတွေအားလုံးကို Alpha-Tocopherol ဓာတ် ပစ္စည်းနဲ့ဖော်စပ်ထားတာကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းမွတ်တောက်ပလာစေပါတယ်။
ဗာဒံစေ့ဟာ ဗီတာမင်အီး ကြွယ် ဝရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်တာကြောင့် ဝက်ခြံပေါက်သူတွေသာမက၊ အရေပြားရောဂါရှိ သူများလည်း မဖြစ်မနေစားသင့်ပါတယ်။ အရွယ်နုပျိုဆေးသဖွယ် အားကိုးထိုက်ပါတယ်။
ဗာဒံစေ့ကို မှန်မှန်စားတဲ့အပြင်၊ ဗာဒံစေ့ဆီနဲ့ပါမျက်နှာကို အသာအယာနှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် အရွယ်မတိုင်မီ မျက်နှာအရေးကြောင်းတွေမဖြစ်စေတော့ပါဘူး။
အသားအရေလည်း ပိုညက်ညောလာပါတယ်။ မျက်ကွင်းညိုသူတွေ မျက်လုံးအောက်တဝိုက် ဗာဒံဆီမှန်မှန် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း မျက်ကွင်းညိုများသိသိသာသာ လျော့ပါးသွားစေပါတယ်။ (မျက်လုံးထဲ ဆီမဝင်အောင် ဂရုစိုက်လိမ်းပါ)
နှလုံးအတွက် သူငယ်ချင်းကောင်းလို့ဆိုရမှာပါဘဲ။ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင် ဗာဒံစေ့က နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဗာဒံစေ့ထဲမှာပါတဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေဟာ ခန္ဓာ ကိုယ်က အစားအစာထဲမှာ ပါလာတဲ့ပြင်ပအဆီတွေစုပ်ယူခြင်းကို ပိတ်ပင်ဟန့်တားပေးပါတယ်။
ဒါ့ပြင်ဗာဒံစေ့ထဲမှာ ဗီတာ မင်အီး၊ ပြည့်ဝဆီများ၊ မဂ္ဂနီစီယမ် နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းတွေ အလုံအလောက်ပါဝင်နေတာမို့နှလုံးသွေးလည်ပတ် စီးဆင်းမှုအားကောင်းစေပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။သွေးထဲရှိ ကိုလက်စထရောပမာဏကို ချပေး တာကြောင့်နှလုံးကျမ္မာလာစေပါတယ်။
မှတ်ဥာဏ်နဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေတိုးပွားစေပါတယ်။ အယ်လ်ဇိုင်းမား(ခေါ်)ဦးနှောက်ဇရာကြိုရောဂါသက်သာဆေးများ၊ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းဆေးနဲ့မှတ်ဥာဏ်ကောင်းဆေးတွေကို ရီဘိုဖလာဗင်၊မဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်တွေနဲ့ဖော်စပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဓာတ်တွေအလုံအလောက်ပါတဲ့ ဗာဒံစေ့ကိုစားပေး ခြင်းဖြင့် တစ်နေကုန်လန်းဆန်းလာစေပါတယ်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားဝေဒနာရှင်များ ဗာဒံစေ့ကိုဖြည့်စွက်စာအားဆေးအဖြစ် မဖြစ် မနေ စားပေးသင့်ပါတယ်။
ဝဖြိုးခြင်း ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်၊ကစီဓာတ်တွေနဲ့ အာဟာရသိဒ္ဓိပြည့်ဝတဲ့ဗာဒံစေ့ကိုစားလိုက်တဲ့အခါ၊
ဒါ့ပြင် ဗာဒံစေ့ထဲမှာပါရှိတဲ့ အကျိုးပြုပြည့်ဝဆီများက ဗိုက်ခေါက်အဆီများကိုချပေးနိုင်တာကြောင့် ဝဖြိုးသူများနဲ့အဆီတွေအိတွဲကျသူများ ဗာဒံစေ့ကို စားပေးကြပါလို့ USDA ကအကြံပြုထားပါတယ်။
Via:ကိုထွန်း ဘဝခါးခါး✏ Credit….
“ဗနျဒါသီး”စေ့ အကွောငျးသိကောငျးစရာ မွနျမာပွညျက ဗနျဒါပငျတှေ ရှဖွေဈပွီ …
မွနျမာပွညျမှာ ဗနျဒါပငျ(ဗနျဒါသီး)လို့အလှယျချေါလရှေိ့တာကွောငျ့၊“ဗာဒံပငျ” ဆိုတဲ့ သူ့မူလအမညျ ပြောကျကှယျနပေါတယျ။အင်ျဂလိပျအမညျကတော့ Indian Almond ပါတဲ့။
ဗာဒံစနေဲ့ပတျသကျပွီးလူနဲ့တညျ့တယျ၊ ကနျြးမာရေးကောငျး တယျ၊ အသားအရကေို ကောငျးစတေယျစတဲ့အခွခေံ ဗဟုသုတလောကျတော့လူတိုငျးသိကွမှာပါ။
သို့သျော ဗာဒံစနေဲ့ပတျသကျပွီး၊ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှေ ဘယျလောကျတောငျမြားပွားတယျ ဆိုတာသိနိုငျကွပါစရေနျ မြှဝရေေးသားလိုကျရပါ တယျ။
ဗာဒံပငျကအကွီးမွနျပွီး၊အရှကျတှေ ကလညျးတဆငျ့ပွီးတဆငျ့ အတကျမွနျတာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ အရိပျရအပငျအဖွဈ စိုကျပြိုးလရှေိ့ကွပါတယျ။
အပငျကိုပေါပေါမြားမြားမွငျတှနေ့ရေတာရယျ၊ အပငျအောကျမှာ ကလေးငယျအခြို့ကွှကေလြာတဲ့ အသီးကို အုတျနီခဲအကြိုးဖွငျ့ ထုခှဲစားနကွေတာရယျကွောငျ့ အရိပျရပငျမှရတဲ့အစရေဲ့ကနျြးမာရေးတနျဖိုးကို သတိမမူမိကွပါ ဘူး။
ယနနေို့ငျငံ တကာမှာတော့ ဗာဒံစနေဲ့ ၎င်းငျးမှရတဲ့အဆီကို တနျဖိုးထားစားသုံးနကွေပါပွီ။ ဗဟုသုတအနဖွေငျ့ မြှဝရေပါလြှငျ ဂရိ နိုငျငံရဲ့ မင်ျဂလာဆောငျတှမှော ဗာဒံစကေို့ “wedding sweets” အဖွဈအထူးတလညျဧညျ့ခံနကွေပါတယျ။
အီရနျနိုငျငံမှာ တော့ NewYear ပါတီပှဲတို့လို ထူးထူးခွားခွားနှဈပတျလညျ ဧညျ့ခံပှဲတှမှောပငျလယျမှ ဆားဖွငျ့အငံဖောကျထားတဲ့ဗာဒံစေ့ လှျောနဲ့ဧညျ့ခံလရှေိ့ပါတယျတဲ့။
မျောရော့ကိုနိုငျငံရဲ့ အရေးကွီးအခမျးအနား မြားမှာဗာဒံစမှေု့နျ့ရောထားတဲ့ နှားနို့က မပါ လြှငျမပွီးပွနျပါဘူး။
pasanda-style (ချေါ) အိန်ဒိရိုးရာဟငျးလြာမှာလညျး ဗာဒံစကေို့ဟငျးခတျ အမယျအဖွဈ ထဲ့ခကျြပေးရပါတယျ တဲ့။
ဗာဒံစကေ့အေးမွစတေဲ့အစှမျးသတ်တိရှိတာကွောငျ့လညျးပူပွငျးခွောကျသှတေဲ့ ပါကစ်စတနျနိုငျငံရဲ့နှရောသီမြားမှာ ဗာဒံစေ့ နဲ့ဖျောစပျထားတဲ့ Almond sherbet ဖြျောရညျကို summer drink အဖွဈ အထူးတလညျသောကျသုံးကွတယျလိုသိရပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အသိအမှတျပွု USDA ရဲ့ ဓာတျခှဲစမျးသပျခကျြမြားအရ ၁ဝဝ-ဂရမျအလေးခြိနျ ရှိတဲ့ ဗာဒံစထေဲ့မှာ၊ လူသားတို့ကနျြးမာရေး ကိုကောငျးကြိုးဖွဈစတေဲ့ ခှနျအား ၅၇၆ ကယျလိုရီ၊ ကစီဓာတျ ၂၁.၆၉ ဂရမျ၊ကျောဓာတျ ဝ.၇၄ ဂရမျ၊
သကွား ၃.၈၉ ဂရမျ၊ ခဖြေကျြလှယျသောအမြှငျဓာတျ ၁၂.၂ဝဂရမျ၊ အဆီဓာတျ ၄၉.၄၂ ဂရမျ၊ ပရိုတငျး ၂၁.၂၂ ဂရမျ၊ လိုငျစငျး ဝ.၅၈ဝရမျ၊ရဓောတျ ၄.၇ ဂရမျ၊ ဗီတာမငျအေ ၁ IU၊ သီအာမငျ(ချေါ) ဗီတာမငျဘီ(၁) ၁၈%၊ ရီဘိုဖလာဗငျ(ချေါ)ဗီတာမငျဘီ(၂) ၈၅%၊
င်ျနအာစငျး (ချေါ) ဗီတာမငျဘီ(၃) ၂၃%၊ဗီတာမငျဘီ(၅) ၉%၊ ဗီတာမငျဘီ(၆) ၁၁%၊ ဖောလိပျ(ချေါ) ဗီတာမငျဘီ(၉) ၁၃%၊ ခြိုလငျး ၁၁%၊ ဗီတာမငျအီး ၁၇၅%၊ ကယျလျစီယမျ ၂၆%၊ သံဓာတျ ၂၉%၊ မဂ်ဂနီစီယမျ ၇၅%၊ မဂ်ဂနီးဈ ၁ဝ၉%၊ ဖော့စဖရကျ ၆၉%၊ ပိုတကျစီယမျ ၁၅% နဲ့ ဇငျ့ ၃၂% တို့အသီးသီးပါရှိကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး ဗာဒံစတှေ့ဟော အသားအရနေုကို ပွနျလညျပြိုစကော၊ မှတျဉာဏျစှမျးအားမြားလညျး ကောငျးစလေို့ကြား/မ အရှယျ(၃)ပါးအားလုံး စားသုံးပေးကွရနျ USDA က အကွံပွုထားပါတယျ။
အူသိမျ၊ အူမမြားနဲ့ အတှငျးပိုငျးအကဆြုံး အူမြားအားလုံးကိုသနျ့စပေါတယျ။ လူတဈယောကျရဲ့အသားအရဟော သူစားသုံးလိုကျသောအစာခဖြေကျြအင်ျဂါ အဖှဲ့အစညျးရဲ့အလုပျလုပျ နိုငျစှမျးအားနဲ့တိုကျရိုကျအခြိုးကနြပေါတယျ။
အစာခဖြေကျြ အင်ျဂါမြားအားနညျးလာတဲ့အခါဝမျးခြုပျခွငျးကိုဖွဈစပွေီး၊ဝကျခွံစို/ဝကျခွံခွောကျ တှပေေါကျလာစပေါတော့တယျ။
ဗာဒံစကေို့မှနျမှနျစားပေးခွငျးဖွငျ့ အစာအိမျထဲရှိအကြိုးပွု ဗကျတီးရီးယားမြားကိုလှုံ့ဆျောပေးတာကွောငျ့အစာခဖြေကျြမှုကိုအားပေးကာ၊ ဝမျးပုပျမြားသကျစပွေီး၊ အစာခအြေင်ျဂါ အဖှဲ့အစညျးသနျ့စငျသှားတာကွောငျ့၊ အသားအရတှေလေညျး မညဈညမျးတော့ပါဘူး။ ဗီတာမငျအီး ရရှိရာအရငျးအမွဈကိုပွပါဆိုရငျ ဗာဒံစကေို့သာ လကျညှိးထိုးလိုကျပါ။
ဝကျခွံစို/ဝကျခွံခွောကျ/ဆားဝကျခွံ အမြိုးမြိုးနဲ့မကျြနှာပျေါရှိအမညျးစကျမြား၊အမာရှတျမြားအတှကျ ဘယျလိုပငျမိတျကပျကောငျးကောငျးလိမျးပါသျောလဲ မပြောကျနိုငျတဲ့အခါ စိတျညဈရပွီး၊ငှကွေေးတတျနိုငျသူမြားလညျး အရပွေားအထူးကု ဆရာဝနျတှနေဲ့ပွသကွညျ့ကွရာ၊ဆရာဝနျတိုငျးက အသားအရကေောငျးစဖေို့ ဗီတာမငျအီး ဆေးတောငျ့လေးတှေ တိုကျကြှေး လရှေိ့ပါတယျ။
အဲဒီဗီတာမငျအီး ဆေးတောငျ့တှနေဲ့ဗီတာမငျအီးဓာတျပါတဲ့ ဆေးတှအေားလုံးကို Alpha-Tocopherol ဓာတျ ပစ်စညျးနဲ့ဖျောစပျထားတာကွောငျ့ အသားအရကေို ကွညျလငျဝငျးမှတျတောကျပလာစပေါတယျ။
ဗာဒံစဟေ့ာ ဗီတာမငျအီး ကွှယျ ဝရာအရငျးအမွဈဖွဈတာကွောငျ့ ဝကျခွံပေါကျသူတှသောမက၊ အရပွေားရောဂါရှိ သူမြားလညျး မဖွဈမနစေားသငျ့ပါတယျ။ အရှယျနုပြိုဆေးသဖှယျ အားကိုးထိုကျပါတယျ။
ဗာဒံစကေို့ မှနျမှနျစားတဲ့အပွငျ၊ ဗာဒံစဆေီ့နဲ့ပါမကျြနှာကို အသာအယာနှိပျနယျပေးခွငျးဖွငျ့ အရှယျမတိုငျမီ မကျြနှာအရေးကွောငျးတှမေဖွဈစတေော့ပါဘူး။
အသားအရလေညျး ပိုညကျညောလာပါတယျ။ မကျြကှငျးညိုသူတှေ မကျြလုံးအောကျတဝိုကျ ဗာဒံဆီမှနျမှနျ လိမျးပေးခွငျးဖွငျ့ ရကျအနညျးငယျအတှငျး မကျြကှငျးညိုမြားသိသိသာသာ လြော့ပါးသှားစပေါတယျ။ (မကျြလုံးထဲ ဆီမဝငျအောငျ ဂရုစိုကျလိမျးပါ)
နှလုံးအတှကျ သူငယျခငျြးကောငျးလို့ဆိုရမှာပါဘဲ။ အရိုးရှငျးဆုံးပွောရရငျ ဗာဒံစကေ့ နှလုံးရောဂါဖွဈခွငျးမှကာကှယျပေးပါတယျ။
ဗာဒံစထေဲ့မှာပါတဲ့ အမြှငျဓာတျတှဟော ခန်ဓာ ကိုယျက အစားအစာထဲမှာ ပါလာတဲ့ပွငျပအဆီတှစေုပျယူခွငျးကို ပိတျပငျဟနျ့တားပေးပါတယျ။
ဒါ့ပွငျဗာဒံစထေဲ့မှာ ဗီတာ မငျအီး၊ ပွညျ့ဝဆီမြား၊ မဂ်ဂနီစီယမျ နဲ့ခန်ဓာကိုယျအကြိုးပွုဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြ ပစ်စညျးတှေ အလုံအလောကျပါဝငျနတောမို့နှလုံးသှေးလညျပတျ စီးဆငျးမှုအားကောငျးစပေါတယျ။
ဒါတငျမကသေးပါဘူး။သှေးထဲရှိ ကိုလကျစထရောပမာဏကို ခပြေး တာကွောငျ့နှလုံးကမ်ြမာလာစပေါတယျ။
မှတျဉာဏျနဲ့ကိုယျခံစှမျးအားတှတေိုးပှားစပေါတယျ။ အယျလျဇိုငျးမား(ချေါ)ဦးနှောကျဇရာကွိုရောဂါသကျသာဆေးမြား၊ကိုယျခံစှမျးအားကောငျးဆေးနဲ့မှတျဉာဏျကောငျးဆေးတှကေို ရီဘိုဖလာဗငျ၊မဂ်ဂနီစီယမျဓာတျတှနေဲ့ဖျောစပျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
အဲဒီဓာတျတှအေလုံအလောကျပါတဲ့ ဗာဒံစကေို့စားပေး ခွငျးဖွငျ့ တဈနကေုနျလနျးဆနျးလာစပေါတယျ။ အယျလျဇိုငျးမားဝဒေနာရှငျမြား ဗာဒံစကေို့ဖွညျ့စှကျစာအားဆေးအဖွဈ မဖွဈ မနေ စားပေးသငျ့ပါတယျ။
ဝဖွိုးခွငျး ကိုတားဆီးပေးပါတယျ။ ဗီတာမငျ၊ သတ်တုဓာတျ၊ကစီဓာတျတှနေဲ့ အာဟာရသိဒ်ဓိပွညျ့ဝတဲ့ဗာဒံစကေို့စားလိုကျတဲ့အခါ၊
ဒါ့ပွငျ ဗာဒံစထေဲ့မှာပါရှိတဲ့ အကြိုးပွုပွညျ့ဝဆီမြားက ဗိုကျခေါကျအဆီမြားကိုခပြေးနိုငျတာကွောငျ့ ဝဖွိုးသူမြားနဲ့အဆီတှအေိတှဲကသြူမြား ဗာဒံစကေို့ စားပေးကွပါလို့ USDA ကအကွံပွုထားပါတယျ။
Via:ကိုထှနျး ဘဝခါးခါး✏ Credit….
February 27, 2020 Pwint LinnဗဟုသုတNewYear, ဗန်ဒါသီး
Previous Post သင့်ကိုနဂိုအရပ်ထက်ပိုပြီး ရှည်လာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်း ( ၉ ) ခု
Next Post ပုရိသတွေ လိုချင်သဘောကျတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးပုံစံများ